musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kuenda kune dzimwe nyika ndiyo Kiyi yeKukura Kwenguva refu US Economic Growth
Pane zviri pachena kuti zvinhu zvakawanda zvakaputswa nehurongwa hwazvino hwekubuda kwevanhu vekuAmerica, asi munhu haagone kuramba mabatiro akanaka akaitwa nekutama munyika kwemazana maviri nehafu apfuura.
Sangano reConcord Coalition neGlobal Aging Institute (GAI) nhasi raburitsa pamwe chete bepa idzva rine musoro unoti, The Vital Role of Immigration in an Aging America. Bepanhau iri, iro riri chikamu chechikamu chipfupi chechikamu chinobuda mwedzi mitatu chinodaidzwa kuti The Shape of Things to Come, rinotsanangura kuti, kunyange sezvo vanhu vanotamira kuUnited States vari kuramba vachidzikira, kukosha kwaro mukukura kwevanhu uye upfumi hwenyika kuri kuramba kuchiwedzera.
“Nyaya yeAmerica inogona kutaurwa muchikamu chikuru senyaya yevakabva kune dzimwe nyika. Zvakadaro zvakakosha sekutama kwagara kuri mukuumba hunhu netsika dzeAmerica, hazvina kumbove zvakakosha mukukura nebudiriro sezvazvichaita mumakumi emakore anotevera. Nyika dzinoverengeka dzakasimukira dzakaita kuti kubuda kwevanhu munyika kuve musimboti wezano ravo renguva refu rekutarisana nekuchembera kwevanhu. Zvichakadaro, United States inoramba ichibva mudambudziko renguva pfupi kusvika padambudziko renguva pfupi, "akadaro Richard Jackson, Mutungamiriri weGlobal Aging Institute uye munyori webepa.
“Kare, patakanga tine mbereko, vanhu vanobva kune dzimwe nyika ndivo vakaita kuti vashandi varambe vachiwedzera. Mune ramangwana, zvichave zvese zvinoita kuti isadzikire, ”akadaro Jackson.
"Kuenda kune dzimwe nyika yanga iri nyaya inopisa yezvematongerwo enyika kwemakore akawanda zvekuti hazvigoneke kupfuura rhetoric yebato uye kuisa pfungwa pane izvo zvinofanirwa kunge zvichizivisa sarudzo," akadaro Robert Bixby, Executive Director weThe Concord Coalition.
“Pane mukana mukuru wekupokana kwemitemo panyaya dzemitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Izvo zvisiri mubvunzo ndezvekuti America yachembera yaizobatsirikana nekuwedzera kune dzimwe nyika, "akadaro Bixby.
Mhedziso huru kubva muchidimbu chebvunzo dzinosanganisira:
• Kukura kwevanhu vezera rekushanda, uye nokudaro basa, ragara riri mutyairi anokosha, uye dzimwe nguva mutyairi anonyanya kukosha, wekukura kwehupfumi muUnited States. Asi sezvo mapoka madiki akazvarwa kubva pakupera kwehondo yeBaby Boom akwira manera ezera, kukura muzera rekushanda kwave kuderera, kubva pa1.7 muzana pagore muma1970 kusvika 0.8 muzana pagore kubvira 2000.
• Mukati memakumi matatu emakore anotevera, maererano neCongressal Budget Office's (CBO) ichangoburwa Kurume 2021 fungidziro yenguva refu, huwandu hwezera rekushanda muUnited States huchakura neavhareji ye0.2% chete pagore. Kukura kwese uku, zvakare, kuchave kuri kukonzerwa nekubuda kwevanhu munyika, izvo zvinofungidzirwa neCBO kuti zvichakwira kubva padanho rayo re2021 rinosvika zviuru mazana mashanu kusvika kunosvika miriyoni imwe pagore, zvishoma pamusoro peavhareji kubva pakuderera kukuru. Pasina mambure ekubvakacha, huwandu hwezera rekushanda hunogona kudzikira.
• Kutamira kuUnited States kwave kuderera zvakanyanya kubva muna 2015, zvakanyanya kusimudzirwa nedenda apo huwandu hwevatorwa hwakadzikira nekuda kwezvinhu zvakaita sekuvharwa kwemiganhu uye kurambidzwa kufamba muna 2020.
• Kuwedzera kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika hakugoni kudzorera kuchembera kwevanhu kana kugadzirisa matambudziko ose ainokonzera. Ikoko kutamira kune dzimwe nyika kunogona kuva nemigumisiro yakakura iri mukuwedzera kukura kwehuwandu hwevanhu vezera rekushanda, uye naizvozvo chiyero chekukura kwebasa uye GDP.
• Kana vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachienderana nezvinodiwa neCBO, United States inogona kutarisira kuona kuwedzera kwenhamba yezera rekushanda inosvika zvikamu gumi nerimwe kubva muzana mumakore makumi mashanu anotevera. Pasina kubuda kune dzimwe nyika, huwandu hwezera rekushanda hunogona kutarisirwa kudzikira neinoda kusvika 11 muzana panguva imwe chete iyoyo.
• Kuti titarise nhamba neimwe nzira, panosvika gore ra2075 vanhu vezera rekushanda vanenge vakura nechikamu chimwe chete muzvitatu pane vasina. Zvimwe zvinhu zvose zvakaenzana, GDP yaizovawo chikamu chimwe muzvitatu chikuru-uye GDP yakakura ichiita kuti zvinhu zvose zvive nyore, kusanganisira kubhadhara mutengo wevanhu vedu vakwegura.
• Kunyangwe nehuwandu hwakakura hwekubuda kwevanhu munyika hunoitwa neCBO, kukura kweGDP kuchadzika kusvika pachikamu chimwe chete neshanu muzana pagore muma1.5 nema2030, isingasviki hafu yeavhareji yayo mushure mehondo. Kana mambure ekupinda nekubuda kwevanhu munyika akatadza kukwira kusvika padanho rinorongwa neCBO, mamiriro ehupfumi angatonyanya kuipa. Nekune rimwe divi, kana mambure ekupinda nekubuda kwevanhu munyika akadarika mwero unorongwa neCBO, mamiriro ehupfumi anogona kunge ari nani.
• Kukura kweGDP hongu kune zvikamu zviviri: kukura kwebasa uye kukura kwezvibereko. Kutama kuri pachena kunowedzera yekutanga, kwete chete nekuti vatami vanowedzera kuhuwandu hwevanhu, asiwo nekuti vangangove vezera rekushanda kupfuura vagari vakaberekerwa munyika. Kunyangwe iwo masimba akanyanya kuomarara, vazhinji vezvehupfumi vanotenda kuti kutamira kune dzimwe nyika kunowedzerawo kukura kwechigadzirwa.
• Kunaka kwehupfumi hunogona kuwanikwa nekubuda kune dzimwe nyika kunocherechedzwa nevakawanda vezvehupfumi. Zvakadaro, kushushikana kwakawanda kwakajairwa asi kwakanyanya kusiko pamusoro pemitengo uye mabhenefiti ekubva kune dzimwe nyika kunoramba kuchikanganisa gakava remutemo. Zvichida chinonyanya kunzwika ndechekuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanotora mabasa kubva kuvashandi vakaberekerwa munyika iyi. Izvi zvinogoneka padanho rakasimba, uye zvinogona kutogoneka padanho reindasitiri. Asi padanho rehupfumi hwenyika dzese nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinobvumirana kuti nyaya yekuti pane makwikwi emari ye zero pakati pemapoka akasiyana ekutsvaga mabasa anounzwa nehupfumi haina musoro.
• Chokwadi ndechekuti mabasa evashandi vanobva kune dzimwe nyika haarambidzi mabasa kuvashandi vakaberekerwa munyika sezvakangoitawo mabasa evakadzi achinyima mabasa kune varume kana mabasa kune vakuru vanonyima mabasa kune vechidiki. Kutaura zvazviri, zvakasiyana chaizvo. Mabasa anotorwa nevanobva kune dzimwe nyika anopa imwe mari, zvichiita kuti pave nekuwedzera kudiwa kwezvinhu nemasevhisi izvo zvinozoita mamwe mabasa. Padanho rehupfumi hwese, kutamira kune dzimwe nyika inzira yakanaka.
Sezvatinotarisa kune ramangwana, zvakasungirwa kune vanogadzira mitemo yemubatanidzwa kuti vatore nzira, ine hungwaru pagwaro rekupinda nekubuda kwevanhu munyika kuti vasimbise budiriro yehupfumi kwenguva refu. Nekutora danho iri - sezvakaita dzimwe nyika - United States inokwanisa kuve nechokwadi chezera rekushanda rakagadzikana kunyangwe huwandu hwese huchikura.